ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျသူမြားဟာ စိတျဓာတျခိုငျမာသူမြားဖွဈ
HomeKnowledgeရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျသူမြားဟာ စိတျဓာတျခိုငျမာသူမြားဖွဈ
H July 06, 2021
Hachi: A dog's half, The notebook လိုမြိုး ရုပျရှငျတှကေို ကွညျ့ရငျ အနညျးဆုံး တဈခါတော့ ငိုဖူးကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျးနဲ့ ငိုတာက အားငယျတတျတဲ့ လက်ခဏာတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။
ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျတဲ့သူတှကေ ပိုပွီးစာနာ နားလညျပေးတတျကွောငျး၊ ခံစားခကျြကို ဘယျလို ထိနျးခြုပျရမလဲဆိုတာ နားလညျကွောငျး၊ နစေ့ဉျကွုံရတဲ့ ပွဿနာတှေ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ ပိုပွီးစိတျဓာတျမာကွောကွောငျး Claremont Graduate တက်ကသိုလျက အာရုံကွောပညာရှငျ Paul J.Zak က ပွောပါတယျ။ သငျက ရုပျရှငျကွညျ့ရငျးနဲ့ ငိုတတျတဲ့သူဖွဈရငျ ကိုယျခငျြးစာတရားရှိပွီး စိတျဓာတျခိုငျမာလို့ပါ။
1. ရုပျရှငျဆိုတာ စိတျကူးယဉျခွငျးလို့ နားလညျပမေယျ့ သူတို့ခံစားခကျြကို မြိုသိပျမထားနိုငျသူမြား ဖွဈကွပါတယျ။
ရုပျရှငျဆိုတာ တကယျလကျတှမေ့ဟုတျတာကို သိပမေယျ့၊ screen ပျေါ စိတျကူးယဉျခွငျးလို့ နားလညျပမေယျ့ ဝမျးနညျးရတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးကို ကွညျ့မိရငျတော့ ငိုမိတာဟာ ကိုယျခငျြးစာတတျသူ ဖွဈနလေို့ပါ။
2. Oxytocin ဟျောမုနျးကွောငျ့ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုကွတာပါ။
Oxytocin ဟျောမုနျးက ကွှကျသားအာရုံကွောတှကေို လှုံ့ဆျောပေးတာကွောငျ့ စိတျထိခိုကျစရာ ဇာတျဝငျခနျးတှဆေိုရငျ ဝမျးနညျးလာစပေါတယျ။ Oxytocin ဟျောမုနျးက ကိုယျခငျြးစာစိတျ ရှိလာအောငျ လုပျပေးပွီး ပွငျပလောကကို လကျခံနိုငျလာအောငျ၊ အကောငျးမွငျလာအောငျ၊ ပြျောရှငျလာအောငျ လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
3. စိတျခံစားခကျြတှကေို ဖျောပွဖို့ ဝနျမလေးကွလို့ပါ။
တကယျတော့ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုဖို့ ရှကျရှံ့မနတေတျသူတှကေ ခံစားခကျြတှကေို ဖုံးကှယျနသေူတှထေကျ ပိုပွီး စိတျဓာတျမာပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ခံစားခကျြ အမှနျအကနျတှကေို ဖျောပွဖို့ သတ်တိရှိနကွေပါတယျ။ သူတို့ကို လာဝဖေနျမှာ၊ အပွဈရှာမှာလညျး မကွောကျပါဘူး။ နားလညျပေးနိုငျမယျ့သူ ရှိမယျဆိုရငျ လူတှကေ သူတို့အတှေးအချေါတှကေို ဖျောပွဖို့ ဝနျမလေးကွပါဘူး။
4. မကျြရညျလှယျတတျသူလညျး ဖွဈနလေို့ပါ။
ငိုတတျခွငျးက လူတှနေဲ့ပိုပွီး ရငျးနှီးသှားစပေါတယျ။ ငိုလိုကျတဲ့အခါ ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိနတေဲ့ အကောငျးအဆိုး အခွအေနတှေကေို ခှဲခွားနိုငျသှားပါတယျ။ ပိုပွီးတော့လညျး ခံနိုငျရညျရှိလာ ပါတယျ။
5. အမွဲငိုနတောက စိတျခံစားမှုတှကေနေ ထှကျပွေးနတော မဟုတျပါဘူး။
ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျတဲ့သူတှကေ လကျတှဘေ့ဝကို အရှိကို အရှိအတိုငျး လကျခံလာတတျကွပါတယျ။ လကျတှဘေ့ဝမှာ ကွီးကွီးမားမား စိတျထိခိုကျစရာ ကွုံလာရငျလညျး တညျတညျ ငွိမျငွိမျနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျသှားပါတယျ။
6. ငိုခွငျးမှာ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီး မရှိပါဘူး။
အမြိုးသားတှကေ သိပျမငိုတတျကွဘူးလို့ လူအမြားက ယူဆကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျတဲ့သူတှကေ ပှငျ့လငျးပွီး ရိုးသားလို့ပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ငိုတယျဆိုတာ မိနျးကလေးတှပေဲ တတျတဲ့အရာ မဟုတျပါဘူး။ ယောကျြားလေးတှကေ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုလို့လညျး စိတျဓာတျပြော့လိုကျတာလို့ ယူဆလို့ မရပွနျပါဘူး။
7. ရုပျရှငျကနေ ဘဝအတှကျ အတှအေ့ကွုံ အမြားကွီး ရသှားကွပါတယျ။
Oxytocin ဟျောမုနျးက လူတှကေို ပိုယုံကွညျလာအောငျ လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျတဲ့သူတှကေ တခွားသူတှနေဲ့ အဆငျပွပွေေ ဆကျဆံသှားတတျပါတယျ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုတတ်သူများဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူများဖြစ်
Hachi: A dog's half, The notebook လိုမျိုး ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ရင် အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ ငိုဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ငိုတာက အားငယ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုတတ်တဲ့သူတွေက ပိုပြီးစာနာ နားလည်ပေးတတ်ကြောင်း၊ ခံစားချက်ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာ နားလည်ကြောင်း၊ နေ့စဉ်ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ပိုပြီးစိတ်ဓာတ်မာကြောကြောင်း Claremont Graduate တက္ကသိုလ်က အာရုံကြောပညာရှင် Paul J.Zak က ပြောပါတယ်။ သင်က ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ငိုတတ်တဲ့သူဖြစ်ရင် ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာလို့ပါ။
1. ရုပ်ရှင်ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းလို့ နားလည်ပေမယ့် သူတို့ခံစားချက်ကို မျိုသိပ်မထားနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဆိုတာ တကယ်လက်တွေ့မဟုတ်တာကို သိပေမယ့်၊ screen ပေါ် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းလို့ နားလည်ပေမယ့် ဝမ်းနည်းရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ကြည့်မိရင်တော့ ငိုမိတာဟာ ကိုယ်ချင်းစာတတ်သူ ဖြစ်နေလို့ပါ။
2. Oxytocin ဟော်မုန်းကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုကြတာပါ။
Oxytocin ဟော်မုန်းက ကြွက်သားအာရုံကြောတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် စိတ်ထိခိုက်စရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဆိုရင် ဝမ်းနည်းလာစေပါတယ်။ Oxytocin ဟော်မုန်းက ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိလာအောင် လုပ်ပေးပြီး ပြင်ပလောကကို လက်ခံနိုင်လာအောင်၊ အကောင်းမြင်လာအောင်၊ ပျော်ရွှင်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3. စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ ဝန်မလေးကြလို့ပါ။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုဖို့ ရှက်ရွံ့မနေတတ်သူတွေက ခံစားချက်တွေကို ဖုံးကွယ်နေသူတွေထက် ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်မာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက် အမှန်အကန်တွေကို ဖော်ပြဖို့ သတ္တိရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့ကို လာဝေဖန်မှာ၊ အပြစ်ရှာမှာလည်း မကြောက်ပါဘူး။ နားလည်ပေးနိုင်မယ့်သူ ရှိမယ်ဆိုရင် လူတွေက သူတို့အတွေးအခေါ်တွေကို ဖော်ပြဖို့ ဝန်မလေးကြပါဘူး။
4. မျက်ရည်လွယ်တတ်သူလည်း ဖြစ်နေလို့ပါ။
ငိုတတ်ခြင်းက လူတွေနဲ့ပိုပြီး ရင်းနှီးသွားစေပါတယ်။ ငိုလိုက်တဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ အကောင်းအဆိုး အခြေအနေတွေကို ခွဲခြားနိုင်သွားပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိလာ ပါတယ်။
5. အမြဲငိုနေတာက စိတ်ခံစားမှုတွေကနေ ထွက်ပြေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုတတ်တဲ့သူတွေက လက်တွေ့ဘဝကို အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံလာတတ်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝမှာ ကြီးကြီးမားမား စိတ်ထိခိုက်စရာ ကြုံလာရင်လည်း တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်သွားပါတယ်။
6. ငိုခြင်းမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မရှိပါဘူး။
အမျိုးသားတွေက သိပ်မငိုတတ်ကြဘူးလို့ လူအများက ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုတတ်တဲ့သူတွေက ပွင့်လင်းပြီး ရိုးသားလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ငိုတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေပဲ တတ်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေက ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုလို့လည်း စိတ်ဓာတ်ပျော့လိုက်တာလို့ ယူဆလို့ မရပြန်ပါဘူး။
7. ရုပ်ရှင်ကနေ ဘဝအတွက် အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရသွားကြပါတယ်။
Oxytocin ဟော်မုန်းက လူတွေကို ပိုယုံကြည်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုတတ်တဲ့သူတွေက တခြားသူတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဆက်ဆံသွားတတ်ပါတယ်။